होस्ट माइनस पार्क होटल Rostov को पाहुनाहरूको रेस्टोनोनाडोन समीक्षामा आराम गर्नुहोस्
ठेगाना "यूरोप" नक्शा rostov-in-don
कोठा र मूल्यहरू होटल "रोस्टोभ-अन-डन
होटल, नम्र स्टाफको भित्रीलाई मन पराउँथ्यो, स्वार्थी स्टाफ, स्वादिष्ट र विविध खाना। खानामा असीमित पेय पदार्थहरू आरामदायी खुशी थिए। रिसेप्शनिस्ट धेरै ध्यान दिएर छ, शोर पाहुनाहरूबाट अर्को नम्बरमा जान भनियो, धेरै छिटो प्रतिक्रिया भयो। प्रभाव मात्र राम्रो थियो, सद्भावना को लागी धन्यवाद!
<< p> सबै कर्मचारीहरूले सावधानी र पन्जा लगाएका सावधानीका साथ अनुपालन गर्दछन्। खाजा, सलाद, मदिरा र फलले सेट गरेको संख्यामा साँझको आदेश दिए। सभ्य फिड, स्वादिष्ट र सन्तोषजनक। मारिन पार्क होटेल, आतिथ्य रेन्डरिटेलनको लागि धन्यबाद!
मैले मारिन पार्क होटल रोस्टोभमा आवासमा प्राप्त गरेको भावनाहरू लामो समयदेखि सम्झिन्छन्। यो नयाँ वर्ष छुट्टीको समयमा थियो, सबै चम्किरहेको थियो प्रत्येक फ्लोरमा चर्को रविच्चिनली क्रिष्टमस रूखहरू। फोटो नयाँ वर्ष फोटो, अझै मेरो इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा लोकप्रियमा। राम्रो नयाँ वर्ष सेट, स्वादिष्ट। तपाईको मुडको लागि धन्यवाद!
म घटनाहरू र सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछु। सधैं rostov मा आउँदै, मारिन पार्क होटल छनौट गर्नुहोस्। यसले हामीलाई पूर्ण रूपमा सूट गर्दछ। हल हो, ठूलो, अद्भुत वातानुकूलितको साथ। कफी ब्रेकका लागि बल्कनीमा क्षेत्रहरू वर्गीकृत छन्।
हामी मारिन पार्क होटेलमा एक घटना एक घटना भयो। उत्तम ठाउँ, आधुनिक भित्री, माउट। उपकरण हामीलाई प्रदान गरिएको थियो, कर्मचारीले उभरनिंग मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न मद्दत गर्यो। यस्तो सर्तहरूमा काम गर्न सजिलो भयो। आतिथ्यको लागि धन्यबाद, फेरि फिर्ता!
धेरै स्वीकार्य मूल्यको लागि शहर केन्द्रको तुलनामा अन्य प्रस्तावहरूको तुलनामा। महान स्थान मारिन पार्क होटल, नजिकैका धेरै उच्च-गुणवत्ता संस्थाहरू, राम्रो यातायात जंक्शन। त्यहाँ होटल नजिक एक पार्किंग छ, सुविधाजनक।
<< p> हामीले नयाँ सालको हव्वालाई होटलमा भेट्यौं र स्नैक्सलाई, तातो भाँडा र सलादबाट एक सेट-मेनूको साथ भेट्यौं। सुन्दर फिड, ठूलो चयन र घर मा स्वादिष्ट। हामी कोठामा असामान्य पूरकबाट खुसी छौं - मन्डरिनहरू र स्पार्कलिंग मदिरा। हाम्रो लागि छुट्टी र साइजनको वातावरण सिर्जना गर्न धन्यवाद!
यूरोप होटेल एक उच्च स्तर, आरामदायक कोठा र शहर केन्द्रमा स्थान हो। युरोप व्यवसाय होटल दुबै काम र मनोरन्जन दुवै मिल्नेछ। यो व्यवसायिक र पर्यटकहरूमा सेवा र सेवाको उच्च स्तरको साथ केन्द्रित छ। युरोप व्यवसायिक होटलको सान्त्वना र कार्यक्षमताको संयोजनले व्यवसाय भ्रमण गर्न मद्दत गर्दछ, र आराम रमाइलो हुन्छ!
होटल Rostov-Ann को ऐतिहासिक र व्यवसाय केन्द्र मा स्थित छ। होटल रेलवे र नदी स्टेशनबाट एयरपोर्टबाट सजीलो पहुँच योग्य छ। ट्रान्सफर समय 20 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन। यसले कुनै उद्देश्यको लागि EP होटेल सुविधाजनक बनाउँछ। पनि नजिकै - चाखलाग्दो सांस्कृतिक सुविधाहरू: नाटकीय र संगीतकारहरू, सिनेमा, पार्क, संग्रहालय, तटबन्ध, तटबन्ध र अधिक। यसैले साँझमा व्यस्त व्यापार दिन पछि, तपाईंसँग राम्रो आराम गर्ने अवसर हुनेछ।
इन्द्रिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,
स्वास्थ्य र सौन्दर्यका लागि सेवाहरू। / LI> :
पर्यटन सुविधाहरूको वर्गीकरणको प्रकाशन अन्तर्गत होटेलमा4ताराहरू छन्, हैन - 201 2013. प्रतिस्पर्धाको सर्वश्रेष्ठ होटेलको शीर्षकलाई सम्मानित गरियो, "सर्वश्रेष्ठ प्रशासक" नामांकन भयो "Donskoyea को स्टार"।
रेजिष्ट्रेसनको क्रममा पाहुनाहरूलाई रूसी संघको राहदानी गर्न आवश्यक पर्दछ। राहदानी द्वारा, बस्ती जारी गर्न असम्भव छ। विदेशका नागरिकलाई दर्ताका लागि कागजातहरूको पूर्ण प्याकेज हुनु पर्छ (पासपोर्ट, भिसा, आउँदो कार्ड, आवास, आदि)
व्यापार होटेलको are0 कोठाहरू मध्ये "युरोप" को आरामदायक र किफायती, पानाराइम ग्लाइज्ड, प्रशस्त हल, आफ्नै बार र सुविधाजनक कार्यक्षेत्रको साथ लक्जली कार्यकारी सौन्दर्य सैनिकहरू छन्। सबै प्रकारका सबै प्रकारहरूमा तपाईं आरामदायक वातावरण, lcd tvs, विभाजित प्रणालीहरू, नुहाउने सामानहरू। असीमित वायरलेस इन्टरनेट पनि कुनै पनि अतिथिको पाहुनालाई पनि उपलब्ध छ। क्लासिक यूरोपीयन आन्तरिक शैलीले आराम र घर आरामको भावना सिर्जना गर्दछ।